वाहा ! मोज गर्यौं ? अभिनेत्री प्रियंका र निकको यो तस्विरले दुनियाँलाई हैरान बनायो, किन यो तस्बिर उनका फ्यानहरुले मन पराएनन् ? – Classic Khabar
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ट्रोलको शिकार भएकी छिन् । जब प्रियंका चोपडा र निक जोनास सँगै आउछन्, उनीहरुको केमिस्ट्री हेर्न लायक हुन्छ । प्रायः उनीहरुका तस्विरहरु बाहिर आउँछन्, जो चर्चामा रहन्छन् । हालै, एक तस्विर बाहिर आएको छ । तस्विरमा दुबै जना एक अर्कासंग गुणस्तरीय समय बिताइरहेका छन् ।
यद्यपि केहि मानिसहरुलाई उनको पोज मन परेको छैन । प्रियंका चोपडा इन्स्टाग्राममा यो तस्विरका कारण ट्रोल भइरहेकी छिन् । एक फ्यानले टिप्पणी गर्दै प्रियंका चोपडाले भारतको संस्कृति बिर्सिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रियंका चोपडा र निक जोनास आफ्नो कामको कारण विगत केहि महिनादेखि एक अर्का संग राम्रो समय बिताउन सकिरहेका थिएनन् ।
जब उनीहरु सँगै हुन्छन्, उनीहरु धेरै आनन्द लिन्छन् । कामबाट समय निकालेर उनीहरु भेटघाट गर्ने गर्छन् । प्रियंकाले हालै आफ्नो एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्, जसमा उनी निकसँग घाममा रमाईलो गरिरहेका छिन् ।
तस्विरमा प्रियंका एक बिकिनी लगाएर घोप्टे परेकी छिन् । अर्कोतिर निक प्रियंकाको नि त म्बमा च म्चा र च क्कुसँगै देखिएका छन् । प्रियंकाले क्याप्सनमा ‘खाजा’ लेखेकी छिन् । प्रियंकाका केही फ्यानहरुले उनको यो तस्विर मन पराएका छन् । मानिसहरु हार्टजस्ता धेरै इमोजी बनाएर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
एक प्रशंसकले लेखे, ‘दिनको प्यारो र कामुक फोटो ।’ अर्को एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘आखिर भारतको नाम चम्कायौं । वाहा छोरी मोज गर्यौं ।’ अर्का अनुयायीले लेखेका छन्, ‘भारतको संस्कृति बिर्सियौं ।’ कामको कुरा गर्दा प्रियंका चोपडा ‘सिटाडेल’ को छायांकनमा व्यस्त छिन् ।
Prevकाठमाडौमा फेरी लम्बियो निषेधाज्ञा, विद्यालय संचालन गर्न पाइने की नपाइने ? (सूचना हेर्नुस्)
Nextएमसीसीका बारेमा के पाक्दैछ खिचडी ? ओली फकाउन कानुनमन्त्री बालकोट पुगे , एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा पनि नेपाल आउँदै